तेस्रो चरणको निर्वाचनमा कुन दल बन्ला मधेशमा एक नम्बर पार्टी? ठुला दललाई कति सहज, कति असहज | News Dabali
तेस्रो चरणको निर्वाचनमा कुन दल बन्ला मधेशमा एक नम्बर पार्टी? ठुला दललाई कति सहज, कति असहज
August 28, 2017 | 9:05 am
काठमाडौँ । असोज २ गते हुने स्थानीय तहको चुनाव जित्नका लागि सम्पूर्ण दलहरुको ध्यान प्रदेश नम्बर दुईका आठवटा जिल्लामा केन्द्रित भएको छ । दलका नेताहरु आ–आफ्ना उम्मेदवार चयन गर्न यतिखेर मधेश केन्द्रीत भएका छन् । यतिखेर जिल्ला, नगरपालिका तथा गाउँपालिकासम्म नेता तथा कार्यकर्ताहरुको ओइरो लागेको छ । जिल्ला सदरमुकामदेखि लिएर गाउँघरमासमेत साना ठूला कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् ।
खासगरी काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको दौडधुप बढी देखिएको छ । यीनै पाँच दलको बीचमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।
पाँचवटै दलको दावी एक नम्बर बन्ने नै हो । काँग्रेसले दुई नम्बर प्रदेशको चुनावलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै मधेश प्रदेशमा जसरी एक पनि एक नम्बरको पार्टी बन्ने तयारीमा लागेको छ । काँग्रेसले कम्तीमा एकसय सीट जित्ने लक्ष्य लिएको छ ।
दुई चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो बनेको एमाले पनि मधेश प्रदेशमा आफ्नो दल नै एक नम्बरको पार्टी बन्ने दावी गरेको छ । ९० भदा बढी सीट ल्याउने एमालेको दावी छ । सो दलले प्रत्येक जिल्लाबाट सुझाव संकलन गरिसकेको छ । र, सोही अनुसार आफ्नो रणनीति बनाउन लागेको छ ।
माओवादी केन्द्र भने एमाले र काँग्रेस जस्तो एक नम्बरको दावी नगरेपनि दुई चरणमा भएका चुनावबाट आएको परिणाम भन्दा राम्रो ल्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
यता, तराई मधेशमा आन्दोलनको शुरुवात गरेर आन्दोलनको नेतृत्व लिएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले पनि मधेशमा सबभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने दाबीका साथ चुनावको तयारीमा लागेको छ । यसअघि भएको दुई चरणाम सम्पन्न चुनावमा समेत भाग लिइसकेका फोरम नेपालले तेस्रो चरणको चुनावमा एक नम्बरको पार्टी बन्ने दावी सो पार्टीका कोषाध्यक्ष विजय यादव गर्छन् ।
उनले भने, ‘मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गरेका हुनाले मधेशमा हाम्रो पार्टी एक नम्बरको पार्टी हुन्छ ।’ आफ्नो पार्टीको प्रतिस्पर्धा नेपाली काँग्रेससँग रहने दावी गर्दै उनले राजपा नेपालको बारेमा जति हल्ला छ, त्यति संगठन नरहेको दावी गरे । ‘दुई नम्बर प्रदेशमा मात्र सिमित राजपा नेपालको जिल्लामा मात्र संगठन छ, गाउँहरुमा संगठन छैन,’ उनले भने, ‘राजपा नेपालसँग हाम्रो कुनै प्रतिस्पर्धा नै छैन ।’
तर, राजपा नेपालको आफ्नै दावी रहेको छ । आन्दोलनकै क्रममा आफ्नो पार्टी चुनावमा भाग लिएको कारण सबैभन्दा बढी सीट आफ्नो दलले ल्याउने सो दलका नेताहरु रहेको छ । मधेशको असल नेतृत्वकर्ता आफ्नो दल भएका कारणले मधेशमा एक नम्बरको पार्टी हुने दावी सो दलका महासचिव केशव झाको छ । उनी भन्छन्, ‘मधेशको मुद्दा र एजेण्डा राजपा नेपालसँग मात्र रहेको छ । मधेशी जनतालाई सबै दलले धोका दिएको राजपा नेपालमात्र अन्तिमसमयसम्म अडानमा रहेको हुनाले मधेशी जनता हामीलाई पत्याउँछन् ।’
फोरम नेपाल बीचैमा आन्दोलन छाडेर चुनावमा भाग लिएको कारणले मधेशी जनता सो दललाई नरुचाएको विश्लेषण राजपा नेपालको रहेको छ । त्यही कारणले फोरम नेपालभन्दा बढी मत आफ्नो पार्टीलाई आउने विश्वास राजपा नेपालका नेताहरुले लिएर बसेका छन् ।
राजपा नेपालका संयोजक महन्थ ठाकुरले चुनावमा आफ्नो पार्टीको प्रतिस्पर्धा ठूला दलसँग हुने बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म त हामी नै एक नम्बरका पार्टी हुन्छौँ जस्तो लाग्छ र त्यही अनुसारको तयारीमा पनि लागेका छौ ।’
ठूला दललाई चुनौति
पहिलो संविधानसभा चुनावमा मधेश आन्दोलनको रापताप रहेको कारण मधेशमा मधेशवादी दललको राम्रै उपस्थिति थियो । माओवादी केन्द्र ठूलो दलको रुपमा उदाएको थियो भने एमाले दोस्रो र काँग्रेस तेस्रो दलको रुपमा आएको थियो । यी सबै आन्दोलनकै प्रभाव थियो ।
तर दोस्रो सविधानसभामा भने मधेश आन्दोलनको कुनै प्रभाव नभएको कारण काँग्रेस एक नम्बर, एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो दलको रुपमा आयो भने मधेशवादी दल चौथो र पाँचौ दलको रुपमा सिमित भए ।
अहिले आएर आन्दोलन जारी राखेको कारणले मधेशमा त्यसको रापताप कायमै रहेका हुनाले यसको फाइदा मधेशवादी दललाई मात्र हुने राजपा नेपालले विश्वास लिएको छ । मधेशमा एमालेको निरन्तर विरोध हुँदै आइरहेको छ । संविधान संशोधनमा एमालेले नसघाएको कारण मधेशमा सो दलको व्यापक विरोध भइरहेको छ । मधेशी दलले ठाउँ–ठाउँमा एमाले निषेधीत क्षेत्र भनि बोर्ड नै झुण्डाएका छन् । त्यसो त काँग्रेस–माओवादीकै पनि विरोध भइरहेको छ ।
सप्तरीका पत्रकार श्यामसुन्दर यादव भन्छन्, ‘एमालेको विरोधको साथै काँग्रेस–माओवादीको पनि कम विरोध भइरहेको छैन । मधेशी जनताका लागि तीनटै दल एउटै हो । तीनवटै दलले मधेशी जनतालाई धोका दिएको मधेशी जनताको बुझाई छ । चुनावको परिणामले यी सबै प्रष्ट हुन्छ ।’
तेस्रो चरणको चुनावका लागि १३६ स्थानीय तहमा यी दलहरुको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन लागेको छ । प्रदेश नं दुईका आठ जिल्लामा एक महानगरपालिका, तीन उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिका गरी १३६ स्थानीय तह रहेका छन् । निर्वाचनमा २६ लाख ६४ हजार ७९२ मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने बताइएको छ । रातोपाटीबाट